Ogaden News Agency (ONA) – Xarunta Dhexe ee JWXO – Doorashada la Sheegay Inay ka Dhacday Itobiya Waxay Ahayd Riwaayad aan la Daawanin
Xarunta Dhexe ee JWXO – Doorashada la Sheegay Inay ka Dhacday Itobiya Waxay Ahayd Riwaayad aan la Daawanin
Posted by ONA Admin	/ May 26, 2015
Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka warbixisay doorasha ku sheegtii Axadii shalay laga dhigayay guud ahaan dhulka ay maamusho xukuumada kalitalisa Itobiya ee EPRDF ayaa ku raacday warbixinadii laga bixiyay inay ahayd riwaayad aan si fiican loo jilin.
Gaar ahaan doorashada la sheegay inay ka socotay Ogadenya ayaa ahayd riwaayad aan la daawanin.
Xarunta dhexe ee JWXO oo u kuurgashay siday uga socdeen Ogadenya riwaayadan ayaa sheegtay in habayaraatee aan magac doorasho lagu tilmaami karin wixii meesha ka dhacay, waxayna Xarunta Dhexe sababtoo ah ma jirin dad tartamay oo lakala doortay iyo doorasho ay dadku ahmiyad siinayeen oo ay u soo baxeen toona. Xarunta ayaa tusaale usoo qaadatay Riwaayadii Qabridahare laga jilayay oo uu ina Ilayna goobjoog ka ahaa halkaasoo ay codaynta bilaabatay 7:00 subaxnimo xiliga Qabridahare soona dhamaatay isla 10:00 subaxnimo oo goobta lagu kala tagay. Sidoo kale Dhagaxbuur ee caasimada Gobolka Jarar ayaa dhamaatay wixii loogu magacdaray codbixinta isla saacad ka dib.
Magaalada Fiiq ee xarunta Gobolka Nogob ayayna iyadu ka dhicin gabi ahaanba wax codayn ah hayaraato ama habadnaatee. Waxaana magaalada kusugnaa Mahdi ayuub oo u ololaynayay waxa lagu sheegay codbixinta ee ladoonayay in ay Fiiq kadhacdo.
Isla warbixinta Xarunta ayaa lagu sheegay qalalaase xoogan oo kadhacday magaalada Jigjiga oo dadbadan lagu xidh xidhay qaar badana lagu dhaawacay. Qalalaasahan ayaa ka danbaysay kadib markay dad cadhaysan oo diidan waxa meesha ka socda mudaharaadeen, halkaasoo ay ciidamada gumaysiga Itoobiyana ay isku dayeen in ay dadkaas xoog ku muquuniyaan xoogna ku codeeyaan. Waxaa xabsiga ladhigay in kabadan 40 qof, waxaana jira dhaawacyo halis ah oo loo gaystay qaar dhibanayaashaas kamid ah oo aan magacyadooda ka helay kuwan hoos ku qoran;
1 baadil faarax
2 muuse gadiid rooble
3 warsame galaydh
4 cabdi maxamuud
5 ow diiriye xuseen
6 heebaan yuusuf.
Sikastaba ha ahaatee doorasha ku sheegtan ayaa ahayd mid uu aduunwaynuhu ogaa riwaayada meesha kasocota waxaana arinkaas makhraati ka ah diidmada hay’adaha caalamiga ah inay korjooge soo dirsadaan doorasha ku sheegtii ka socotay Itobiya, marka laga tago dhowr dal oo kamid ah dawladaha ay ku maamusho Itobiya midawga